Iji ákwá agha a na - akpụ aka, Foe nke mma agha, onye na - emepụta ihe n’ebe a na - egbu n’obodo Chainmail - China Boegger
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Security > Ụdị:>Agha Chainmail
A na - eme ihe agha a na - eji ọgụgụ ndị a na - agba gburugburu ma ọ bụ n’akwụkwọ. A na - ekwesịkwa ụgbọ mmiri nke ọ bụla n’ime ọgụgụ anọ ndị ọzọ, ọ dịghịkwa ịda. Mgba a na - anọ, anyị mepụtara, nwere ọtụtụ ihe ndị ọhụrụ: sleeve, ọkara sleeve, sleeve, Mkpirikpi na uwe ogologo. Dị ka ihe ị na - amasị ma na - eme ihe ị ga - eme, ị pụrụ ịhọrọ nke kasị mma. N’otu oge ahụ, a na - eji aka a na - arụ n’ahụ́ nke anyị mepụtara, na - egosipụta ụkwụ ndị na - arụ ọrụ dị ukwuu na ebe dị njọ. Ọ bụrụ na i wepụ ya, ị gaghị enwe ihe isi ike, nanị ọ dị mkpa ịkpa n’akwụkwọ n’akwụkwọ ma kwe ka ị na - enyere gị aka.
Mmiri a na - enweghị aka n’ahụ́
Agha a na - echebe ahụ́ dum n’aha
L ihe a na - eme: akụkụ carbon, akụ̀ na - adịghị egbuke, aluminum a na - enye egbukepụ, aluminum a na - enye anodized, titanium, brass, kọpa, Brons, nd.
Ụzọ a na - enwe nrụkọ: nwepụta, butting na welding.
Ụlọ Nzukọ a na - enwe ụkọ: European 4 n’ime 1 n’otu.
Mmadụ a na - agwọ n’elu n’elu: a na - akpọ zinc, a na - akpọ ojii, n’akwụkwọ ọla.
Mụkọ Sleeve: n’enweghị aka, sleeves mkpirikpi, ọkara sleeves, sleeves zuru ezu.
Ụfọdụ n’ime ihe ọmụma ndị ọzọ: a pụrụ ịtụgharị n’obodo wii na ụgbọ mmiri.
A na - akụkụ ụgbọ mmiri SS dị ka ihe agha a na - akwụ
Ihe a na - akụ ụgwọ ọnụ ọgụgụ dị ka ihe agha a na - akwụ
Anya a na - arụ ọrụ n’ahụ́. Wiyad ọ bụla na - ahọrọ tupu igbochi, ọnụ ọgụgụ nke ọ bụla na agwọ anọ ndị ọzọ iji zere ịda.Kọmputa
Mụ na ya dị mfe, na - ejikwa uwe. A na - enye aka e ji aluminium na - arọ arọ dị mfe, na - enwukwa n’elu. N’otu oge ahụ, n’ihi ime ọ̀tụ̀tụ̀ atọ a na - eme, a na-azụ n’ime ihe pụrụ ịda n’obi gị.
Ụdị nchebe dị ukwuu. A na - enwe aka n’ahụ́ nke a na - anọ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ gị pụrụ ikpuchi n’ókè dị ukwuu nke ahụ́ gị.
Mmadụ a na - eguzogide ịkpọ ọkụ. E nwere ike ịkpo ya n’elu ụgbọ mmiri n’ebe e nwere ike ịna - enwe nchebe.
Ọ na - arụ ọrụ na mma. Ọ bụghị nanị n’ịnchebe kamakwa n’ihe omume.
Ọtụtụ ihe a na - eme n’ọtụtụ ihe ndị ọhụrụ na nhọrọ ndị a na - eme nhọrọ pụrụ imeju ihe ka ọtụtụ n’ime ndị na - eme eme ihe dị irè.
Ọrụ nchebe. Mbụ a na - akwụ ya pụrụ igbochi ahụ́, aka na ụkwụ n’elu ka mma agha ahụ́, ube, mma, mmetụta ngwá agha, na ihe ndị a na - eme, ebe ọ bụ na ha ka pụrụ ịkpuchi ahụ́ gị ihe zuru ezu ma ọ bụkwanụ.
Ịrụ ọrụ. Mkpa chainmail dịkwa ukwuu maka ịrụ ọrụ dị ndụ n'ime ọrụ, n'ịgba mgbakọ, n'oge a na - eme n'ezinụlọ, uwe iji knight, uwe Halloween, cosplay, uwe dị mma, ihe ndị na - eme egwuregwu, n’agha.
Ọrụ ọzọ. E nwekwara ike iji ọka chainmail mee ihe dị ka onyinye maka ndị ọzọ, akwụkwọ ozi DIY, egwuregwu agha zuru ezu, Ma ọ bụ ihe ndị mmadụ e kere eke, ma ọ bụ echiche ọ bụla ọzọ e kere eke.
Ọzọrụ:Ịgba ígwè a na - agbawanye n’ọrọ
Mwagụ̀ chainmail armor, chainmail shirt, foe of sword, chainmail hauberk, chainmail vest,
Uru na nsogbu ndị a na - abara Chainmail n’ọgbọ agha a na - akọ
Mkpịa chainmailBụ ụdị agha. E jikọrọ ígwè ahụ a kpọrọ ígwè. O nwere àgwà ndị dị ukwuu, iguzogide siri ike n’ịbụ na ịkpọpụ. Uji Chainmail bụ ụdị ihe agha nke a na-eme ihe nile n’ụwa. N’ozi agha nke mba...
Ụzọ a na - eme ka a na - akọ n’aha
Ikekwe ChainmailỤzọ dabara:1 Ụkwụ Ụkwụ.Ụkwụ ụkwụ na egwuri egwuri egwu dị nnọọ mma nke ukwuu Oh, ụcha akpụkpọkwụ pụrụ ịhọrọ obere ego, n’ihi na uwe ndị ahụ bụ ụcha siri ike, n’ihi ya, ụdị ákwà akpụkpọ...
Olee otú ị ga - esi họrọ ihe agha a na - akwụsị?
Agha AluminumuỌ bụrụ na ị chọrọ ka ị ghara ịna - ala n’oge aAgha ọchaalMa jiri ya mee ihe iji gosipụta n’ihe ndị a na - eme, ọ bụ ihe kacha mma nhọrọ. Aluminum na - ewute n’ebe dị njọ ma na - egbukepụ...
Okwu zuru ezu maka mkpụrụ akwụkwọ na n’akwụkwọ ndị e ji chainmail hauberk
Okwu a na - akpọsa mkpụrụ akwụkwọ na n’akwụkwọ ndị a na - enye n’akwụkwọ.Chainmail hauberkA na - ekewa n’ebe obibi a na - anọ n’ụlọ na a na - akwụsị n’ụwa. A pụrụ ikewa n’akwụkwọ ndị dị n’ụlọ n’akwụkw...
Ihe Ndị Na - enye Ụzọ
N’akwụkwọChainmalNkịtị anyị nwere Chainmail Hauberks na Chainmail Haubergeons. Site n’ime ndị Celt na ndị Rom ruo ndị knight nke oge n’etiti, Agha chainmail bụ otu n’ime ihe ndị kasị oké ọnụ ahịa onye...
Olee otú a ga - esi na - akwado iro ọkpụkpụ agha?
Ụfọdụ ndị okenye dị iche iche n'ime ndị iro mma agha pụrụ ịkọnọ ma na - ekwekọta ihe dị iche iche. Taa anyị ga - ele anya otú a ga - esi nweta ụta ọkpụkpụIro mmagaN’egwuregwu. Ọ bụrụ na ị amaghị, ọ ga...